တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ဇော်မိုး(ခ)နိုင်ရဲဇော် (ကျိုက်မရောမြို့နယ်- မဲဆန္ဒနယ် ၂ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း) > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ဇော်မိုး(ခ)နိုင်ရဲဇော် (ကျိုက်မရောမြို့နယ်- မဲဆန္ဒနယ် ၂ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း)
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ September 28, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး Leaveacomment 190 Views
တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ဇော်မိုး(ခ)နိုင်ရဲဇော်
မေး- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ?
ဖြေ- ပြည်သူ့အရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဆန္ဒကငယ်ငယ်ကတည်းကရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအပေါ်စိတ်ပါဝင်စားမှုကလည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြီးမားပါတယ်။ အခုလိုပါတီစုံဒီမိုကရေစီအခင်းအကျင်းမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့ ကိုယ်စားပြုခွင့်ကတော့ နိုင်ငံရေးအရပါဝင်လိုမှုအနေနဲ့ရော၊ ပြည်သူလူထုအကျိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုနဲ့ပါ ကိုက်ညီတဲ့အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့ အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး- အခုလို ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ယောက်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရခြင်းက မွန်လူမျိုးတွေ၊ မွန်ပြည်နယ်သား အတွက် ဘာတွေ အထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
ဖြေ- ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်အရွေးချယ်ခံရရင်တော့ အများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါ။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အမျိုးသားရေး၊ အမြင် ၃ ရပ်အရလက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံပါအချက်တွေထဲက နယ်မြေဒေသအတွက် ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲ၊ လုပ်နိုင်တာတွေဦးစွာလုပ်မယ်၊ မလုပ်နိုင်တာတွေကို လုပ်နိုင်အောင်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဘာတွေဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ရမလဲ၊ အတတ်နိုင်ဆုံးကြံဆမယ်။ ဥပဒေတွေ ဘာပြင်သင့်လဲ၊ ဘာတွေအသစ်ရေးဆွဲသင့်သလဲ၊ ပြင်သင့်ရင်ပြင်ဖို့တင်ပြရမယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ အဓိကအကျဆုံးကတော့ မိမိဒေသမှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ လမ်း၊ တံတား၊ စီးပွားရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရယ်၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးတွေ လုံးဝမြတ်ခြေပြတ်လို့မဖြစ်ဘူး ထိတွေ့သိရှိ လိုတာတွေတင်ပြ တောင်းဆို တိုက်ယူပေးနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါတွေဆောင်ရွက်ပေးသွားပါ့မယ်။
မေး- တကယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရပြီးဆိုပါက မွန်လူမျိုးတွေနဲ့ မွန်ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား?
ဖြေ- အရွေးခံရရင် သေချာတာကတော့ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အကြိုးစားဆုံးသူဖြစ်မှာသေချာတယ်။ ကျွန်တော်အရွေးခံမှာတော့ ကျိုက်မရောမြို့နယ် ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၂ ပါ။
လယ်ယာချောင်းမြောင်းပေါတဲ့ဒေသပါ။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတိုးတက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရေနက်ကွင်းတွေရှိပါတယ်။ ရေထုတ်နိုင်ခဲ့ရင် စိုက်ပျိုူမြေတွေတိုးလာမှာပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုူးကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မြစ်ရေတင်စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းလဲရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ပြီးသုံးသပ်ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်။
မေး-အခု ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံမယ့် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ အန်ကယ် အနေနဲ့ မြင်ပါသလဲ?
ဖြေ- ဘိလပ်မြေစက်ရုံရဲ့ သဘာဝဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ ကြံရွယ်နေတဲ့ ကျောက်မီးသွေးဓာအားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းကို ဟန့်တားသွားဖို့ရှိပါတယ်။
ပြည်ပကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု များပြားခြင်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွေကလဲ ဒီဒေသရဲ့ ပြသာနာပါပဲ။
မေး- ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါက ဘယ်ကိစ္စရပ်ကို ပထမဆုံး ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ပေး သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ စဉ်းစားထားပါသလဲ ခင်ဗျာ?
ဖြေ- ပထမဆုံးဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမှာကတော့ လူထုတွေရဲ့နေ့တဒူဝရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ သွားလာရေး၊ ပညာရေး အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့ အမြန်ဆောင်ရွက်ပေးချင်တယ်။
မေး- နောက်တစ်ခုက မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးထဲက ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ ရှိပါသလဲ?
ဖြေ-စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ ပြီးရင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပြီးတော့သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ အမျိုးသားရေး၊ အမြဲတမ်းအပြိုင်မြှင့်တင်နေရမှာကတော့ပညာရေးပေါ့။
မေး- မွန်လူမျိုးတွေအတွက်ကော ဘာတွေ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ စဉ်းစားထားပါသလဲ?
ဖြေ-မွန်လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ ခိုင်မာတဲ့ မွန်သမိုင်းကျမ်းကြီးတစ်ခုပြုစုချင်တယ်။ မွန်စာပေသင်ကြားရေး ဒီထက်တိုးတက်ချင်တယ်။ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ပေးချင်တယ်။ နောက်ဆုံး မွန်အမျိုးသားနေ့ရုံးပိတ်ရက် ရချင်တယ်။
မေး- မဲဆန္ဒရှင်တွေကို မီဒီယာကနေ ဘာများမှာကြားလိုပါသလဲ?
ဖြေ- မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက်မှာကြားလိုတာက မွန်လူမျိုးနဲ့မွန်ဒေသအတွက် နိုင်ရဲဇော်အလုပ်အကြွေးပြုလျှက်ပါ။ ဒီထက် ပိုးပြီး ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်အကျွေးပြုနိုင်ဖို့ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှု မရှိမဖြစ်လိုပါတယ်။ ထောက်ခံအားပေးကြပါလို့ပြောလိုပါတယ်။
ပညာအရည်အချင်း- ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ သမိုင်း၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(Qualifying)/နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် (U.F.L) အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊
မှတ်ပုံတင်အမှတ်- ၉ မမ န(နိုင်) ၀၃၅၅၇၈
လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ- ၁၁ အရှေ့တပ်မြေလမ်း၊ ဖက်တန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့
ယှဉ်ပြိုင်မည့် မဲဆန္ဒနယ်- ကျိုက်မရောမြို့နယ်
ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်- ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်(၂)
စစ်ဖက်တွင် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ထိ မြန်မာပြည့်အနှံ့ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့။
ရာဇဝင်ထဲကမွန်၊ ဓမ္မစေတီ မျက်ရည် နိုးထလေတော့ ဟံသာဝတီ စသည့် ထင်ရှားသည့် ကဗျာ/သီးချင်းများကို ရေးသားစပ်ဆိုခဲ့။
စာပေဟောပြောပွဲပေါင်းများစွာကို နေရာဒေသများစွာတွင် စာပေဟောပြောခဲ့။ အံဒင်ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်လျက်ရှိပြီး အံဒင်ကို ကယ်တင်ကြကဗျာကို ရေးသားခဲ့။
လူမှုရေး/အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများ(အကျဉ်း)- မွန်သမိုင်းသုတေသီအနေဖြင့် ပျူနှင့် မွန်အရေးကိစ္စတွင် မွန်တို့နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်လာသော ပျူစားတမ်းများ စာတမ်းကို ရန်ကုန်မြို့ ပျူစာတမ်းဖတ်ပွဲ၌ ဖတ်ကြား၍ မွန်တို့ကိုယ်စား တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းစာတမ်းအား ရန်ကုန်မြို့ စာတမ်းဖတ်ပွဲ၌ ဖတ်ကြားခဲ့ပြီး၊ သုဝဏ္ဏဘူမိတူးဖော်ရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့။
မွန်သမိုင်းသုတေသနအသင်း (MHRA) တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး၊ ရှင်စောပုအမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရှင်အသင်း၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ မွန်အမျိုးသားပါတီတွင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်၊ သုတေသနမူဝါဒနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနမှူးအဖြစ် မွန်အမျိုးသားပါတီဝင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ လယီဂွန်း 2015-09-28
Previous စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ မဖြစ်မနေ လက်တွဲရန်လို
Next မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NCA လက်မှတ်မရေးထိုးပါက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် လေ့လာသူအဖြစ်သာ တက်ရောက်ခွင့်ရှိမည်ဟုဆို